प्रमुख अतिथि को ?
राजनीति सर्वोच्च र सर्वोच्च हुनैपर्छ । राजनीति कथं सर्वोच्च स्थानमा आसिन हुनसकेन भने किन यसो भो भनी गम्भीर हुनैपर्छ । नीतिले पनि भन्छ– नीतिहरूको पनि राजा राजनीति हो । ‘राजा’ सर्वेसर्वा एवं सर्वोच्च स्थानमा रहने हुँदा ‘राजा’को प्रतीकात्मक रूपमा या विम्बका रूपमा प्रस्तुत भएको हो भन्ने लाग्छ ।
दुवै युगका सूत्रधार
एउटा दु:खद नाटक भदौ १५, २०७५ को दिन आकाशवाणीबाट सुनेँ । माध्यमको किसिमले यो रेडियो नाटक नै थियो । यो नाटक हरिप्रसाद रिमालले गरेका ६/७ हजार नाटकको रूपान्तरण थियो । यो नाटकमा उनी निर्देशक थिएनन्, एक पात्र थिए ।
पत्रकार होइन, वकिल बन्न चाहन्थे, कुलदीप नयर । तर समयको बहाव यसरी परिवर्तन भयो कि पत्रकारिता नगरी धरै पाएनन् । कलेजको फाइनल परीक्षा सकिएको मात्र के थियो, भारत विभाजित भयो ।
गिद्धलाई हिंस्रक, फोहोरी र घिनलाग्दो चराको रूपमा हेरिन्छ । तर सिनोमा लुछाचुँडी गरिरहेका गिद्धको चर्तिकला, आकाशमा कावा खाँदै उडिरहेका बथान र पर्यावरणीय महत्त्वलाई हेर्‍यौं भने त्यस्तो लाग्दैन ।
यदि तपाईं कुनै विषयमा महान बन्न चाहनुहुन्छ भने उत्कृष्ट व्यक्तिसँग सिक्नुहोस् । भौतिकशास्त्र पढ्नेले अल्बर्ट आइन्सटाइनसँग सिक्न पाए त्योभन्दा ठूलो के हुन्छ ?त्यो धेरै नै हो ।
संविधानले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य तथा नि:शुल्क हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने हक प्रदान गरेको छ । यस प्रयोजनका लागि सरकारले संघीय संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गरेको छ । विधेयकमा त्यस्तो शिक्षाले सबैको ‘पहुँच, जीवनोपयोगी र गुणस्तर’ सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो लेख प्लास्टिकको कलमले लेख्दैछु । बिहान केही घन्टा भए पनि प्लास्टिक प्रयोग गर्दिन भन्ने ठानेको थिएँ, तर उठ्ने बित्तिकै प्लास्टिककै बु्रसले दाँत माझ्न पुगेछु ।
बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा भाग लिन विशिष्ट पाहुना काठमाडौं आएका छन् । त्यसै त काठमाडौंका सडक व्यस्त छन् । त्यसमाथि विशिष्ट पाहुनाको सुरक्षा संवेदनशीलताले ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । मानिस सास्ती खेप्न बाध्य छन् ।
अधिनायकवादी राजनीतिक नेताले न्यायपालिकालाई बाधक देख्छ । कमजोर दल र राजनीतिज्ञले अदालतको आश्रय तथा सहयोग लिन खोज्छन् । आफ्नो राजनीतिक आकांक्षा पूरा नहुँदा दुबैले दोष स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई दिन पुग्छन् । अन्ततोगत्वा न्यायपालिका राजनीतिको पहिलो सिकार हुने गर्छ । नेपालमा न्यायालयको हविगत त्यही भएको छ ।
क्यानाडामा सन् २०१४ मा केही नगरपालिकाका प्रतिनिधि छानेर करका विषयमा अध्ययन गरिएको थियो । ६९ प्रतिशत उत्तरदाताले स्थानीय वासिन्दालाई थप कर लगाउनु हुँदैन भन्ने जवाफ दिएका थिए । व्यवसायलाई थप कर लगाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा ५३ प्रतिशतले मत जाहेर गरेका थिए । यसले कर उठाउने कार्य विकसित देशमा पनि प्रितीकर हुँदैन भन्ने देखाउँछ ।
सिर्जना फुलाउने शिक्षक
चार्ल्स डार्बिनका पिता छोरालाई डाक्टर बनाउन चाहन्थे । तर डार्बिनको डाक्टर बन्ने चाहना पटक्कै थिएन । उनको चाहना प्रकृति विज्ञानतिर थियो । उनलाई प्रकृति विज्ञानले तान्यो । लामो समयको अनुसन्धान, खोजबाट विश्व प्रसिद्ध महान वैज्ञानिक बन्न पुगे । के उनी डाक्टरभन्दा कम बने त ? उनीहरूका अभिभावक दु:खी बने त ? विद्यार्थीको भविष्य शिक्षकको हातमा भर पर्छ ।